Atụmatụ ndị na-egbu ahịa ọdịnaya gị #CONEX | Martech Zone
Nyaahụ m kesara ọtụtụ ihe m mụtara banyere iwu ABM azum na CONEX, ogbako na Toronto na Uberflip. Taa, ha wepụtara nkwụsị niile site na iweta ọmarịcha ahịa ọ bụla ụlọ ọrụ ga-enye - Jay Baer, ​​Ann Handley, Marcus Sheridan, Tamsen Webster na Scott Stratten ịkpọ aha ole na ole. Agbanyeghị, vibe ahụ abụghị ụdị ọdịnaya gị ga - esi tos na ndụmọdụ.
Ọ bụ naanị echiche m, mana mkparịta ụka taa bụ ọtụtụ ihe gbasara ime ihe n'eziokwu na otu ị si emepe ọdịnaya gị - site na usoro ahụ, otu ị si doo anya, otu ị si enyocha ndị na-ege gị ntị, ruo na ụkpụrụ nke azụmahịa gị.
Mkparịta ụka ahụ malitere Onye nchoputa Uberflip Randy Frisch ịkekọrịta ma ọnụ ọgụgụ dị egwu ma nwee nchekwube banyere ọdịnaya. O jiri ihe atụ mara mma (nke zuru oke na vidiyo) nke nwa ya nwoke na-anwa igwu egwu Justin Bieber site na ekwentị mkpanaaka, Sonos, na Google Home. Naanị otu nyere mmezu ozugbo - Homelọ Google. Ihe atụ: Nwa Randy na-achọ ọdịnaya dị na sistemụ niile, mana naanị otu mere ka ọ dị mfe ịchọta ma gee ntị.
Nke a bụ ụwa anyị bi na ebe a na-ebuga n'ụlọ ogologo ụbọchị niile.
Amara - abanye na nkọwa zuru ezu banyere ịmepụta a Ọdịnaya Remix Matrix nke ahụ na-enye ihe ọmụma nke ga-eme ka njikọ dị n’etiti ọdịnihu gị na gị. Ọ kọwara ihe mgbaru ọsọ, nsogbu, eziokwu, mgbanwe, na omume dị mkpa iji ruo ndị na-ege ntị.
Scott - tinye ihe nkiri na-atọ ọchị ma na-atọ ọchị nke gosipụtara etu ụkpụrụ omume dị egwu si dị na azụmaahịa, ebe ụlọ ọrụ na-etinye usoro aghụghọ (dị ka ịchụ nta akụkọ agabigala) iji nweta uru dị mkpụmkpụ ma mebie aha ha. Dị ka Scott si tinye ya:
Omume na iguzosi ike n'ezi ihe abụghị ihe mmeghari ohuru.
@ebere_igbo Scott Stratten
Marcus - tinye na-enweghị ntụpọ, ngwa ngwa ọkụ na-echetara anyị na eziokwu na ịkwụwa aka ọtọ bụ ihe ndị ahịa ọ bụla chọrọ mgbe ha na-achọ ozi na weebụsaịtị gị, mana ha anaghị achọta ozi dị oke egwu (dị ka ọnụahịa). Ọ kọwara otú ị ga-esi zaa ajụjụ n'eziokwu, na omimi, ma ghara itinye ụlọ ọrụ gị n'ihe egwu. N'aka nke ozo, o gosiputara otu I ghaesi guzo ulo oru gi site na iza ajuju ndi obi gi na acho na ntaneti.
Mmasị onye ọ bụla na-ekwu okwu taa kwuru otu akụkọ… ndị na-ere ahịa ọdịnaya na-egbu azụmahịa ha na ahụmịhe na-adịghị ike, adịghị ike ọdịnaya nke na-adịghị emegharị agịga ahụ. Oge niile ndị ahịa na azụmaahịa na-eme nyocha ma na-anya njem nke ndị ahịa ha kwa ụbọchị. Mgbe ụlọ ọrụ na-eme ya n'ụzọ ziri ezi, ha na-enye ndị ahịa ha ume ka ha tozuo onwe ha ma mechie ọrịre ahụ na-enweghị ihe ọ bụla mmekọrịta ọ bụla. Mana mgbe ụlọ ọrụ mere ya ihe ọjọọ, imirikiti akụnụba dị ịtụnanya ha na-etinye na ọdịnaya furu efu.
Mgbe anyị na-emepe ọdịnaya anyị na ndị ahịa, m na-eme ka o doo anya na ezigbo nnyefe bụ naanị otu ụzọ n'ụzọ iri nke ọrụ. Anyị na-eji ndị na-eme nchọpụta, ndị na-akọ akụkọ akụkọ, ndị na-ese ihe, ndị na-ese vidio, ndị na-eme ihe nkiri, na ihe ọ bụla ọzọ dị mkpa iji mepụta ọdịnaya ahụ. Anyị na-enyocha ndị na-ajụ ase na ndị na-ege ntị ebe a ga-etinye ya ma kwalite ya. Anyị na-enyocha asọmpi ahụ, azụmahịa, ndị na-eme mkpebi n'ezie, na akụkụ ọ bụla nke njem ahụ dị ka oghere ọ bụla na nke mbụ ahịrịokwu ahụ.
Ọ bụ egwuregwu dị ogologo. Anyị anaghị egwu egwu, anyị na-egwu maka ịgba ọsọ… iji merie. Iji merie, ndị na-ere ahịa ga-ahụrịrị na ụlọ ọrụ ha dị ka ndị eziokwu, ndị kwesịrị ntụkwasị obi, ndị nwere ikike, na ndị dị njikere ije ozi. Na mgbe anyị mere ya n’ụzọ ziri ezi, anyị na-emeri oge ọ bụla.
Enweghị ụzọ m ga - esi kwụsị post a ụbọchị na CONEX na - enweghị aha Esemokwu Afọ. Site na onye ọbịa dị egwu Jay Baer, ​​nnọkọ a bụ otu n'ime ihe ọchị, ọtụtụ ihe okike m hụtụrụla n'ọgbakọ. Bravo maka CONEX maka imepụta ihe a dị ịtụnanya ahụmahụ.
Tags: Ann Handleyndakọrịtaogbako ọdịnayaụkpụrụ omumeeme ihe n'eziokwuikwesị ntụkwasị obiJay BaerMarcus Sheridanogbako ahiascott gbara akwụkwọOnyinye Websteresemokwu dị n'ime yaeziokwuuberflip